महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् बालिका किन ? – Everest Dainik – News from Nepal
महिनावारी हुँदा विद्यालय जाँदैनन् बालिका किन ?
बाजुरा, चैत २३ । बाजुराको गौमुल गाउँपालिका–४ मानाकोटमा रहेको कीर्तिचौर माविमा हाल २५० छात्रा अध्ययन गर्दै आइरहेकी छन् । तर पनि उनीहरुले नियमित रुपमा पठनपाठन गर्न पाउँदैनन् । नियमित पठनपाठन गर्नका लागि उनीहरु वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ ।
उहाँले छाउ भएको बेलामा विद्यालय आउने बाटाभरि देवताका मन्दिर भएका कारण र विद्यालयमा समेत देवता भएको हुँदा विद्यालयमा नआउने गरेको बताउनुभयो ।
छाउ भएको बेलामा देवीदेवता भएको बाटो हिँड्दा देवता रिसाउने भएको भन्दै आमाबुबाले समेत स्कूल जान दिँदैनन् जोशीले भन्नुभयो । छाउ भएको बेला विद्यालय नजाँदा पढाइमा समेत बाधा भएको बताउनुभयो ।
विद्यालयमा छाउ भएको बेला जानलाई छात्रामैत्री शौचालय नहुँदा थप समस्या भएको जोशीको भनाइ रहेको छ । विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय नहुँदा दिसापिसाब गर्नसमेत समस्या हुने गरेको जोशीको भनाइ रहेको छ ।
छात्रामैत्री शौचालय बनाउन विद्यालय प्रशासन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेवास्ता गरेको जोशीले गुनासो गर्नुभएको छ ।
छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गर्दा पनि केही कमजोरी भएका कारण छात्रा विद्यार्थीले हैरानी खेप्नु परेको रोकायाले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले विद्यालयभित्र रहेका दुई वटा चर्पी भनेजस्तो नभएका बताउनुभएको छ ।
विद्यालयमा आएको चर्पी निर्माणको योजनाले चर्पी निर्माण गरे पनि झारो टारेजस्तै भएको उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ ।
ट्याग्स: महिनावारी, स्कूल